ဘုရားစာ တရားစာတှေ ရှတျပွရငျး အဘတှကေိုယျတိုငျ တိုငျးပွညျဖကျြဆီးပုံတှကွေောငျ့ သံဝဂေရနပွေီဖွဈတဲ့ ရှရေူပါဦး – Cele Lover
ဘုရားစာ တရားစာတှေ ရှတျပွရငျး အဘတှကေိုယျတိုငျ တိုငျးပွညျဖကျြဆီးပုံတှကွေောငျ့ သံဝဂေရနပွေီဖွဈတဲ့ ရှရေူပါဦး
ရှရေူပါဦးကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာ မျောဒယျတဈယောကျလို့သူမကိုယျသူမ ပွောနကွေပမေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူမကိုတပျခဈြသူလို့ပဲ သိထားကွပါတယျနျော. တဈခြို့ဆိုရငျသူမကို ခုမှမွငျဖူးတာဆိုပွီးတောငျ ရေးသားနကွေပါတယျ။ မကွာခငျရကျပိုငျးတုနျးကတော့ သူမကိုအေးခမျြးအောငျလို့ အဘတှကေ စီစဉျပေးမှုတဈခုကွောငျ့ဆိုပွီးတငျလာခဲ့လို့ ပှဲဆူသှားရပွနျပါတယျနျော..
ဒီနလေ့ေးမှာလညျး ရှရေူပါဦးက “သူယုတျမာမြားသညျ ကိလသောကို မဖကျြဆီးလောကကွီးကိုသာ ဖကျြဆီးလရှေိ့ကွ၏….ဆိုသလိုပဲသူတျောကောငျးတှဟော သူယူတျမာတှနေဲ့ ဖကျပွိုငျမပွောဘူးသူတို့မှာ ကောငျးမှုကုသိုလျတှနေဲ့အခြိနျပွညျ့နေ လို့ အမှိုကျတှအေတှကျအခြိနျမပေးဘူးသူယုတျမာတို့ရဲ့စျောကားမှုကိုလညျး သညျးခံတတျကွတယျဒါကွောငျ့လညျး သူတျောကောငျးလို့ သတျမှတျတာသညျးခံတယျဆိုတာ
လူတိုငျးမလုပျနိုငျဘူးသညျးခံခွငျးနဲ့အတူအောငျမွငျမှုတှကေို ရယူလရှေိ့တယျသူတဈပါးအကြိုး ပကျြစီးဆုံးရှုံးအောငျမလုပျတဲ့အပွငျ သူတဈပါးရဲ့အ ကြိုးစီးပှားကိုသာ လိုလားတတျကွတယျဒီတော့ မိမိတို့ရဲ့ကံ၃ ပါးတှကေို ပွနျဆနျးစဈကွညျ့လြှငျ မိမိဟာ ဘာလဲဆိုတာအဖွထှေကျလိမျ့မယျမကောငျးမှုရှောငျ ကောငျးမှုဆောငျ ဖွူအောငျစိတျကိုထားနစေ့ဉျ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ တဈခုခု ရအောငျယူ လူငယျဆိုလြှငျလညျး
ကုသိုလျ၊ပညာ၊ဥစ်စာ ရှာသခွေငျးတရားဟာ အရှယျ မရှေးလို့ငှကျတှလေို ပြံရငျးသတေတျသလို လူတှလေညျး ကွံရငျးသတေတျကွတယျဆိုတာ သတိခပျြ” ဆိုပွီးရေးသားလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူမရေးသားထားတဲ့ ပို့ဈအောကျမှာတော့ သူမကိုယျတိုငျ အဘတှကေို တျောလှနျနပွေီဖွဈတာမို့ ဝမျးသာပါတယျဆိုပွီး အားပေးထားကွပါသေးတယျနျော
Source: Shwe YuPar Oo
ဘုရားစာ တရားစာတွေ ရွတ်ပြရင်း အဘတွေကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးပုံတွေကြောင့် သံဝေဂရနေပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေရူပါဦး
ရွေရူပါဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို့သူမကိုယ်သူမ ပြောနေကြပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမကိုတပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်. တစ်ချို့ဆိုရင်သူမကို ခုမှမြင်ဖူးတာဆိုပြီးတောင် ရေးသားနေကြပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်းကတော့ သူမကိုအေးချမ်းအောင်လို့ အဘတွေက စီစဉ်ပေးမှုတစ်ခုကြောင့်ဆိုပြီးတင်လာခဲ့လို့ ပွဲဆူသွားရပြန်ပါတယ်နော်..
ဒီနေ့လေးမှာလည်း ရွေရူပါဦးက “သူယုတ်မာများသည် ကိလေသာကို မဖျက်ဆီးလောကကြီးကိုသာ ဖျက်ဆီးလေ့ရှိကြ၏….ဆိုသလိုပဲသူတော်ကောင်းတွေဟာ သူယူတ်မာတွေနဲ့ ဖက်ပြိုင်မပြောဘူးသူတို့မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့အချိန်ပြည့်နေ လို့ အမှိုက်တွေအတွက်အချိန်မပေးဘူးသူယုတ်မာတို့ရဲ့စော်ကားမှုကိုလည်း သည်းခံတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်း သူတော်ကောင်းလို့ သတ်မှတ်တာသည်းခံတယ်ဆိုတာ
လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးသည်းခံခြင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေကို ရယူလေ့ရှိတယ်သူတစ်ပါးအကျိုး ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင်မလုပ်တဲ့အပြင် သူတစ်ပါးရဲ့အ ကျိုးစီးပွားကိုသာ လိုလားတတ်ကြတယ်ဒီတော့ မိမိတို့ရဲ့ကံ၃ ပါးတွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် မိမိဟာ ဘာလဲဆိုတာအဖြေထွက်လိမ့်မယ်မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားနေ့စဉ် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ တစ်ခုခု ရအောင်ယူ လူငယ်ဆိုလျှင်လည်း
ကုသိုလ်၊ပညာ၊ဥစ္စာ ရှာသေခြင်းတရားဟာ အရွယ် မရွေးလို့ငှက်တွေလို ပျံရင်းသေတတ်သလို လူတွေလည်း ကြံရင်းသေတတ်ကြတယ်ဆိုတာ သတိချပ်” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ သူမကိုယ်တိုင် အဘတွေကို တော်လှန်နေပြီဖြစ်တာမို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဆိုပြီး အားပေးထားကြပါသေးတယ်နော်
Previous Article မကွာခငျသရုပျ‌ဆောငျလူမငျး လှတျမွောကျတော့မညျ့ဟု အသိပေးလာတဲ့ ဇနီးဖွဈသူ ခငျစံပယျဦး
Next Article အမမြေားအဖှဲ့ဝငျတဦးဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယို ဇာတျပို့ဇာတျရံသရုပျဆောငျ ဒျေါထိပျတငျထား ဒီနမှေ့ာ ဆုံးပါးကှယျလှနျ